लेखनाथको आर्थिक विकासमा सहकार्य : अधिकारी
लेखनाथ, ९ असोज। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दामु अधिकारीले लेखनाथ र पोखराको समग्र विकासमा एक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नबन्दासम्म औद्योगिक क्षेत्रको विकासको ठोस एजेण्डा बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले उनको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अधिकारीले सरकारको तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयसँगै मिले… पुरा पढौ
पोखरा, ९ असोज। मानव मिलन परिवारको आयोजनामा जैन स्थानक भवन, एयरपोर्ट, पोखरामा चार दिवसीय निःशुल्क एकुप्रेसर शिविर शुरु भएको छ। मानव मिलन संस्थाका संस्थापक डा मणिभद्र मुनि महाराजको सानिध्यतामा सञ्चालित उक्त शिविर शुक्रवारसम्म चल्ने आयोजक समितिले जनाएको छ। शिविरमा फरीदावाद भारतबाट आएका डा सुभाष जैन, डा जानकी कपूर, डा सरोज जैन, र अशोक जैनले सेवा प्रदान गरेका छन्। पुरा पढौ
हेम्जा बोर्डिङमा दन्त शिविर
पोखरा, ९ असोज। हेम्जा बोर्डिङ स्कूल, पोखरा-२५ हेमजामा मंगलवार दन्त शिविर भएको छ। कान्तिपुर डेण्टल हस्पिटलको आयोजना र हेमजा बोर्डिङ स्कूलको व्यवस्थापनमा भएको उक्त शिविरमा ६ सय ५० जना विद्यार्थी तथा अभिभावको सहभागिता थियो। शिविरमा कान्तिपुर डेण्टल हस्पिटलका डा आरपिएच मोहन कोइराला, डा सुष्मिता थापा सहित २० जना स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले दात परीक्षण गरेका थिए। दन्त शिविरमा आएका अभिभावकले शिविर फलदायी… पुरा पढौ
पोखरा, ८ असोज। पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत कर घटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले हाल लिइरहेको करको दरमा १० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो। योसँगै पुस मसान्तसम्म कर बुझाउने करदाताले अब २० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यसअघि उनीहरुले १० प्रतिशतमात्रै छुट पाउँदै आएका थिए। त्यसपछि पनि वर्षैभरी १० प्रतिशत कर छुट हुने महानगरले जनाएको छ। कृषियोग्य… पुरा पढौ
बेगनासतालमा श्रीमद्भागवत् महायज्ञ गरिने
लेखनाथ, ८ असोज। बेगनासतालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बेगनासतालमा मंसिर २२ देखि २९ गतेसम्म श्रीमद्भागवत् विराट ज्ञान महायज्ञ गरिने भएको छ। स्थानीयवासीको पहलमा राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपालले आयोजना गर्ने सो महायज्ञबाट विभिन्न समयमा तालमा भएको दुर्घटना परी ज्यान गुमाएका अमरआत्माको चिरशान्तिको कामना र आगामी दिनमा त्यसप्रकारका दुर्घटना नहोस् भन्ने कामना गरिनेछ । सोमबार आयोजना गरिएको स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाबीचको छलफलमा बोल्दै… पुरा पढौ
पञ्चकोशी आर्थर डाडाँखर्कको अध्यक्षमा कमल
पोखरा, ८ असोज। पञ्चकोशी आर्थर डाडार्ँखर्क समाज पोखराको १९ औं साधारणसभा तथा १० औं अधिवेशनले सर्इ कमल गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। समिति उपाध्यक्ष क्या. कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नासु मेखबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष सुवेदार रत्नबहादुर गुरुङ र सहसचिव सर्इ पदमबहादुर गुरुङ चयन भए। त्यस अवसरमा छ जना जेष्ठ नागरिक, नौ जना एसर्इइ उत्तीर्ण विद्यार्थी, डा आकर्षण गुरुङ, नर्स… पुरा पढौ
पोखरा, ८ असोज। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चीनको हाईनान प्रान्त भ्रमणका लागि त्यसतर्फ लागेका छन्। मुख्यमन्त्री भैसकेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो भने नेपालकै मुख्यमन्त्रीहरुमध्ये दोश्रो भ्रमण उनको हो। हाईनानको राष्ट्रिय दिवसमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उनलाई निम्तो पठाइएको थियो। सोमबार पोखराबाट हिडेका उनी मंगलबार चीनतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। सातादिने भ्रमणका लागि उनको टोलीमा मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, नीति तथा… पुरा पढौ
पोखरा, ७ असोज । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीकै कारण काममा समस्या भैरहेको बताएका छन् । सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्न नसकेको कारण सरकारको काम प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘प्रभावकारी काम गर्न दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो नि ? संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने जनशक्ति चाँडो पनि हुनुपर्‍यो । व्यवस्थित पनि हुनुपर्‍यो । वैज्ञानिक पनि हुनुपर्‍यो,’ गण्डकी प्रदेशसभालाई आइतबार सम्बोधन… पुरा पढौ
पोखरा, ७ असोज । पोखरा ड्यामसाइडस्थित फेवा किनारमा माछापुच्छ्रे प्रतिविम्ब पार्क (झण्डा पार्क) निर्माणका लागि सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको ५०/५० लाख रुपैयाँ लगानीमा पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि समिति गठन भएको छ । प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव मुक्तिराम पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार सचिव इश्वरचन्द्र मरहट्टा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल र महानगरकै… पुरा पढौ
लेखनाथ, ७ असोज। गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, वाणिज्य, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले मानिसको मुख्य शत्रु भनेकै गरीबी र पछौटेपन भएको बताएका छन्। सिलिङगे कृषि उत्पादक सहकारी संस्था, पोखरा २६ को १० औं वाषिर्क साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री लम्सालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले जसमा सृजनशील भावना हुँदैन, उसको आर्थिक उपार्जनमा पनि कमी हुने भन्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुन… पुरा पढौ